Xalka kaliya ee haray, waa in Baarlamaanka la kala diro sida uu qabo qodobka 67aad ee dastuurka KMG ah. - Wargeyska Faafiye
Waxaa hubanti ah maalin kasta oo ay howshaan is jiid jiidka ah sii socotaba in wax weyn ay ka qasaarayaan ummadda soomaaliyeed ee ka dhursugaaya wax ka qabadka duruufaha adag ee ay ummadda Soomaaliyeed maanta ku nool yihiin. Waxaa markii labaad dib loo celinayaa, dowladdii uu soo saaray ra’isulwasaare Cumar Cabdirashiid. Waxa uuna mar kasta, sida cad ra’isulwasaaruhu ka cabsanaa inuu waayo kalsoonida baarlamaanka, markaas ayuu maalmo dheeri ah weydiisanaa si uu dib u soo fiiriyo haddii uu xildhibaano badan ku qancin karo taageeridda wasiirada uu soo magacaabay. Waxeyse u eg tahay in waxa xildhibaanada ay ka fiirinayaan dowladda la soo gudbiyo mar kasta, inay tahay oo kaliya, inay iyaga ay ku jiraan iyo in kale, waa iga su’aale wax kasta ma xildhibaanadaa noqonaaya?
Wax kasta anay igu fiican yihiin, meesha ay na geysay waan aragnay, welina waxaan u malaynayaa inaysan xildhibaanada taas ka tanaasulin, kamana tanaasuli karaan waayo iyagaa markii horeba ku yimid qaabkaas oo sida aad arkayso qabiil ama jufo Soomaaliyeed oo iyadu kuwa sheega inay metelaan ku qanacsan waa la la’ yahay.
Hadaba xildhibaanadaan u dhaqmaaya sidii kuwii isbaarada joogay, ma waxaan u ogolaanaa waxa ay rabaan innagoo nafsaddeenna ku qancinayna oraahdaan cusub ee laga isticmaalo meelaha dulmiga iyo iskudul noolaashuhu ay ku badan yihiin oo waxa ay tahay “xaq ma ahane waa xal” ee aan u yeelno sida ay rabaan si uun dowladdu u shaqo gasho, mase waxaan lee nahay aan sharciga wax ku kala helno, oo yaanan xildhibaanada la siinin waxeysan xaq u laheyn.
Waxaa sax ah in sharciyadda la dhowro oo weliba maanta Soomaaliya waxa ay u baahan tahay waxaa ugu weyn in ay hesho nidaam dowli ah oo runtii la isku haleyn karo, waana in qof kasta uu dareemaa in wax uusan xaq u laheyn inaanan loo deyn isagoo looga bedelanaayo inuu sameeyo waxa isaga xaqqa loogu lee yahay amaba ay shaqadiisu tahay. Waxa kale oo u baahan in la isweydiiyo waa, haddii ay sida ay hadda u diidayaan ansixinta dowladda ay sii wadaan, waxa Dastuurka ku meel gaarka ahi uu ka qabo?Qodobka 67aad ee dastuurka ku meel gaarka ah, waxa uu sheegayaa in baarlamaanka la kala diri karo haddii uu awoodi waayo inuu meel mariyo ama ansixiyo golaha wasiirada ee la horkeenay. Iyadoo la og yahay dhibka ay keeneyso in waxa yare e dhisan la burburiyo, hadana sida qof xil haaya haddii uu xilkii ka soo bixi waayo loo bedelo ayaa sharcigu ogolaanayaa in xildhibaanada naftirkooda la bedelo iyada oo taas xal laga raadinaayo. Maanta waxa ay mareysaa inuusan jirin xal kale, oo la isku dayay mid kasta oo taas dhaama. Waana hubanti inuu waqti kale ummadda ka sii dhumaayo, waxaase hagaagaayo sida ay dad badani qabaan maamulka dalka oo waxaa fududaanaya in la isla xisaabtamo oo la ogaado inaysan jirin heyad iyadu sharciga ka sareysa oo sida ay rabto ugu tuman karta waajibaadka dastuuriga ah ee iyada laga sugaayo. Haddii ay taas dhacdana waxa fududaaneysa in isla xisaabtanka dowladdu noqoto mid la isku haleyn karo oo koox kooxeysugu ay ku suurtoobeyso oo kaliya inta uu sharcigu ogol yahay.
Fursadda kaliya ee xildhibaanadaan u hartay waa inay meel mariyaan, dhowladda la soo wado ee la horkeeni doono in ka yar toban cisho gudahood, haddii ay meel marin waayaanna waxaa fududaaneysa sidii la isaga horwareejin lahaa oo weliba sharciga loola tiigsan lahaa iyadoo la ilaalinaayo nidaamka dowliga ah, waana sida uu qabo qodobka 67aad ee dastuurka KMG ah, waana waxa kaliga ee xal waara u helaaya isjiijiidadka aan macnaha ku dhisneyn, suurta gal ka dhigaayana horumarinta maamul wanaaga, waxaana hubaa in howshaas lagu wada dhaqaaqi doono.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsJaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka oo cambaareeysay weerarkii Hotel.Susan Rice withdraws as candidate for secretary of stateDhimashada Meles Zenawi .Calema Saarkii Madaxweeynaha Cusub .Baydhabo oo qarax ka dhacay